HUB USB-C multi-seranan-tsambo
HUB USB-C Port tokana
Ny USB4 fampahalalana manokana dia mankasitraka ary manangana amin'ny famaritana USB 3.2 sy USB 2.0 efa misy. Ny maritrano USB4 dia mamaritra fomba iray hizarana rohy hafainganam-pandeha haingam-pandeha miaraka amina karazana fitaovana farany marobe izay manompo tsara indrindra amin'ny famindrana daty amin'ny tyye sy ny application. Amin'ny maha USB Type-C ...
Seranana fampisehoana HDMI
Ny HDMI dia natao hanoloana ny zana-tsipiky ny fampitana an-tsary sy ny fifindran'ny horonan-tsary toa ny terminal SCART na RCA. Izy io dia manohana endrika horonan-tsary amin'ny fahitalavitra sy solosaina isan-karazany, ao anatin'izany ny SDTV, horonantsary HDTV, miampy audio digital nomerika marobe. Na ny HDMI na ny UDI tsy misy fampitana feo dia mandova ny ...
Tsara kokoa ve ny HDMI noho ny VFA, raha izany, Inona no antony?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-07-29
Efa ho 35 taona izao ny VGA ary endrika an-tsehatra. Ho an'ny solosaina maoderina dia midika izany fa tsy maintsy miova ianao amin'ny signal digital, amin'ny analogue RGB & sync, avy eo miverina amin'ny digital mba aseho amin'ny monitor LED / LCD anao - hisy fatiantoka kalitaon'ny sary isaky ny dingana, anisan'izany ...
Inona no fenitra USB 3.2?
Universal Serial Bus, na USB, dia efa nisy hatry ny ela ary nampiasainay hampifandray fitaovana maro isan-karazany manomboka amin'ny fitehirizana ka hatrany amin'ny fitaovana fampidirana. Rehefa mandeha ny fotoana dia mila havaozina ny fenitra mba haharaka ny fampiasa maoderina sy ny faran'ny mpampiasa farany. Famaritana sy teknika samihafa d ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-06-29
Hub USB-C & hub 3.1 3.1 Jereo eto izay rehetra ilainao ho fantatra momba ny hubs USB-C sy ny hub USB 3.1. Inona no mahasamihafa azy? Misy fanavahana ve? USB Type-C dia endrika mpampifandray izay natomboka tamin'ny taona 2015. Ny mpampitohy Type-A, izay efa fahita hatry ny ela, dia soloina ...
USB 3.0 hub Ny fenitra USB 3.0 naseho tamin'ny taona 2008 dia nampanantena fitomboan'ny taham-pahakarana avo lenta raha oharina amin'ny USB 2.0 teo alohany teknolojia. Noho ny zava-misy fa ny USB 3.0 dia mifanaraka amin'ny teknolojia teo aloha, ny fitaovana taloha dia mbola afaka ampiasaina amin'ny hub 3.0 USB vaovao. Summar ...
Inona no entin'i HDMI amintsika?
Teknolojia HDMI Efa ho valo tapitrisa fitaovana ampiasain'ny teknolojia HDMI no nandefa hatramin'ny nanombohana ny famaritana HDMI voalohany tamin'ny desambra 2002. Ny famaritana HDMI 2.1 farany navoakan'ny volana novambra 2017 dia manohy mamela ny fampiroboroboana ireo sokajy vokatra vaovao sy solutio manavao ...
inona ny famaritana HDMI 2.1;
HDMI 2.1 Famaritana HDMI® Famaritana 2.1 no fanavaozana farany indrindra ny famaritana HDMI ary manohana karazana vahaolana video avo lenta sy taham-pahavitrihana ao anatin'izany ny 8K60 sy 4K120, ary ny vahaolana hatramin'ny 10K. Tohana koa ny endrika HDR mavitrika, ary mitombo ny fahafahan'ny bandwidth ...
Ahoana ny fiasan'ny USB Type-C Connector amin'ny Mode HDMI Alt?
Ny fakan-tsary HDMI Alt ho an'ny mpampitohy USB Type-CTM dia ahafahan'ny fitaovana loharano manana alàlan'ny HDMI mampiasa mpampifandray USB Type-C hifandray mivantana amin'ireo fampisehoana azo alefa HDMI, ary handefa ireo fambara sy fiasa HDMI amin'ny tariby tsotra tsy mila protokol sy mpampitohy. adaptatera na dongle. Izany dia ahafahan'ny t ...
inona ny USB 3.2?
Famaritana USB 3.2 Rehefa mandroso ny fanavaozana ny teknolojia, miovaova ireo karazana fitaovana vaovao, endrika haino aman-jery, ary fitehirizana lafo tsy lafo. Mitaky fantsom-pifandraisana bebe kokoa izy ireo mba hitazomana ireo traikefa iraisan'ny mpampiasa antenaina. Ankoatr'izay, mitaky hi ...
Mampiavaka ny USB Charger (Fanaterana herinaratra USB)
Ny USB dia nivoatra avy amin'ny interface data afaka manome herinaratra voafetra ho mpamatsy herinaratra voalohany misy interface data. Androany fitaovana maro no miantoka na mahazo ny heriny amin'ireo port USB izay misy solosaina finday, fiara, fiaramanidina na koa socket wall. USB dia nanjary takelaka herinaratra hatraiza hatraiza ho an'ny maro ...
1. USB Type-C® Cable sy Connector Specification tokony ho fantatrao
USB Type-C® Cable and Connector Specification Miaraka amin'ny fahombiazan'ny interface USB, misy ny filàna ny fampifanarahana ny haitao USB mba hanompoana ireo sehatra sy fitaovana informatika vaovao kokoa noho ny firosoana amin'ireo endrika endrika kely sy mahia ary maivana kokoa. Betsaka amin'ireo sehatra sy fitaovana vaovao ireo no ...
Misokatra: 8:00 maraina - Manidy: 22:00 PM
Tsara kokoa ve ny HDMI noho ny VFA, raha izany, Inona ...
Midira ao amin'ny Gazety USN Life & mahazoa voucher 10%